ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မုသာကိုသုံးသောသူကိုရှောင်ပါ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဒီဇင်ဘာ. 01 2019 |5မိဖတ်ပြီးသား
ကျနော်ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ချိန်းတွေ့စတင်ချိန်တွင်, ငါသည်အ Milwaukee ရဲ့အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ, ငါကျောင်းသို့အချိန်ပြည့်ခြင်းငှါသွားကြ၏, ငါကဗျာစာအုပ်ထုတ်ဝြေခင်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်. ထိုအသေး, ကျွန်မအံ့ဩခြင်း, ငါသည်အသေးညာဘက်လူတစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့သည်မပြောစဖူးအဘယ်ကြောင့်? ဒါဟာကျွန်တော့်အရူးကငါ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှစတင်သော, frenetic အချိန်ဇယားဖြစ်နိုင်သည်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်.
ကျနော်လည်းတခြားအလုပ်စီမံကိန်းကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့ထံချဉ်းကပ်ပြီး. မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော့်တစ်ဦးအလွန်မကြာခဏပေါ် အခြေခံ. အသစ်ယောက်ျားတွေ emailing နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်. ဟုတ်ပါတယ်, အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့ကိုတစ်နေရာရာအဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်ဆန်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့, ငါ့အကြိုက်ဆုံးရာအရပ်ကဲ့သို့ကော်ဖီဆိုင်ကို. ငါ pop နိုင်, တစ်နာရီစကားပြောခန်း (အစဉ်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုဖြစ်သည့်) ပြီးတော့ငါ့လမ်းပေါ်မှာရှိ. ဒါဟာကျွန်မစိတ်ပိုင်း To-do ၏ငါ၏အစဉ်အ-ကြီးထွားလာစာရင်းပယ် check လုပ်ထားရုံမျှသာနောက်ထပ်အစည်းအဝေးခဲ့သည်.
ထိုအသေချာ, ကျနော်တို့ရက်စွဲများကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ရှိသည်င်ကြောင့်ရံဖန်ရံခါကောင်လေး gripe လို… နှင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်… ပြီးတော့တခါတရံတွင်, cancel. သို့သော်ဟေး, ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့သည်, ထိုသူသည်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေမိန်းကလေးပေါ့ကိုနားမလည်နိုင်ပါလျှင်ထိုသူသည်မိမိဆားတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ခဲ့. မှန်သော?
ကျွန်မအီးမေးလ်ကနေတဆင့်သူတယောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှီတိုင်အောင်ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့, ငါ့ကိုအထက်အနည်းငယ်အသက်ကြီးတဲ့သူကိုခဲ့သည်, ကလေးတွေနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူသူတက်စတင်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကချဲ့ထွင်ခဲ့. သူကစမတ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်တံပိုးမှုတ်ငါသည်သူ၏အီးမေးလ်များကြောင့် intrigued ခဲ့သည်. ကျွန်တော်တွေ့ကြံဖို့သဘောတူကြသောအခါနောက်ဆုံးတွင်နေ့ရောက်သောအခါ. ငါမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ calendar ပေါ်တွင်ရက်စွဲစီစဉ်ထား, ရက်စွဲကိုချဉ်းကပ်သကဲ့သို့ငါသည်အချိန်စေနိုင်ဖြစ်မှာလမ်းမရှိဖြစ်ခဲ့သဘောပေါက်ပြီးဖျက်သိမ်းရန်ခေါ်. သူသည်လျောက်ပတ်ကြီးနှင့်ကျနော်တို့ဖုန်းတွင်ပြောဆိုရန်ဆက်လက်, ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တစ်ချိန်ကငါသည်သူ့ကိုသိကျွမ်းဖို့အချိန်ရှိသည်င့်နေသေးတယ်ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကိုငါလိုင်းဖြတ်သူ့ကိုရရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့. ကျမတို့ဟာတခြားတရက်စွဲစီစဉ်ထားငါကဲ့သို့ကောင်းစားခြင်းရှိ၏ cancel ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်အဆိုပြုချက်ကိုငါ့နိုင်ခြင်း-To-ကျေးဇူးပြုပြီးသူဌေးကငါ့စားပွဲခုံမှာယဉ်ကျေးတက် popped ခဲ့.
ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်စွဲနောက်ထပ်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် rescheduled ပြောငှါရှက်ကြောက်မိပါတယ်. ထိုအခါနောက်ဆုံးတော့, နောက်ဆုံးတော့စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာမှာတော့ကျနော်ညာဘက်ခရစ်စမတ်မတိုင်မီကိုယ်တော်ကိုခရီးဦးကြို. ကျွန်မအလုပ်ပယ်သောနေ့ရက်ကာလကိုသိမ်းယူခဲ့ပေမယ့် 'ထဖမ်းရန်သွားခဲ့သည်’ နောက်ဆုံးမိနစ်စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင်. ငါငါ့လမ်းပေါ်တွင်ကော်ဖီခွက်ကိုလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘို့သူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဖို့သဘောတူ.
သူကချောမောပြီးရယ်စရာကြီးနဲ့ကျွန်မသူ့ကိုချက်ချင်းကြိုက်တယ်. ထိုအခါသူသည်ငါ့ကိုငါ့အပုဒ်တွင်ရပ်တန့်ဖွဲ့သောအရာတစ်ခုခုကပြောပါတယ်, အပ်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ငါ့အလုပ်ရှုပ်နေအသက်တာ၏တေးသံကိုချွတ် screeching.
တစ်ခါတုန်းက Barnes ကတစ်ဦးစာအုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ပြု. Noble နှင့် fiftiesh redheaded သောမိန်းမမှဤအဖွင့်ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ. “အွန်လိုင်းအိပ်နေသောသူ၏လူအပေါင်းတို့နှင့်အဘယ်သို့တက်ဖြစ်?”. အချို့သောရယ်မောခြင်းရှိခဲ့သည်, နှင့်အချို့ခုတ်တီးအဖြစ်ကောင်းစွာ. ငါသည်အလျှင်းအံ့အားသင့်ဟူသောမေးခွန်းကိုအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့, ကျွန်မနှစ်ဆယ်လူငါးယောက်၏အခန်းတခန်းတွင်စကားပြောခဲ့လျှင်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, သူတို့မည်မှာသေချာပါသည်အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်. တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်.
အဲဒီအခြေအနေတွေ၌ငါ၏ပုတ်အဖြေကို၎င်းတို့၏အပြုအမူအရေးမယူဘဲလျစ်လျူရှုနေသည်မပါဘဲမုသာဝါဒီများနှင့်အတူစာနာတတ်ဖို့ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်. ရဲ့စဉ်းစားကြစို့: လူတွေဘာကြောင့်အိပ်ကြပါ? 1) သူတို့လုံခြုံမှုကင်းမဲ့င်သောကြောင့်, 2) သူတို့ကအမှန်တရားကိုပြောပြလျှင်သိသောကြောင့်, သူတို့ပင်ရက်စွဲရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. Pretty ရိုးရှင်းတဲ့, မှန်သော? မဒီပရိသတ်ကသားမိန်းမတို့အဘို့. တကယ်တော့, သူတို့ကယောက်ျားသည်မုသာစကားကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှာမှင်မဟုတ်သာ (ဆိုးသော) အမျိုးသမီးသည်မုသာ (ဒါကြောင့်မဆိုး), ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသက်အရွယ်တောင်းရန်သူတယောက်အဘို့အ uncivilized ယ်အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်.
နားထောင်. ငါသည်မုသာစကားကိုရပ်တန့်လို့မရဘူး, ဒါပေမယ့်အရေခြုံမှုကိုရပ်တန့်ဖို့မျှော်လင့်ပါဘူး. သူတို့ကော့တေးပါတီပွဲမှာအကြှနျုပျကိုခွေးမနှင့်အထူးသဖြင့်အတော်လေးအလုပ်ရှုပ်သောအခါအထူးသဖြင့်မုသာဝါဒီများပြစ်တင်ရှုတ်ချကြပြီးမုသာဝါဒီများ.
သင်က 5'5 ကောင်လေးဆိုရင်နှင့် 80% တိုတောင်းသောအမျိုးသမီးများ၏ပင်သင်တို့နှင့်အတူအထွက်မသွားပါလိမ့်မယ်, သင် 5'8 င်ပြော′ နှင့်သင်၏ကျက်သရေမုသာအောင်မြင်သောမျှော်လင့်. ဒါဟာမ, ဒါပေမယ့်သင်ကမမျှော်လင့်.
သင်ဆိုရင် 175 ပေါင်သောမိန်းမ, သင်သည် 'ကုမ္ပဏီနှင့် Tone' 'ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဌနာပြုစေခြင်းငှါ. ဟုတ်ကဲ့, '' အနည်းငယ်အပိုပေါင်’ သို့မဟုတ်ပင် '' ကျယ်ပြန့်’ နဲနဲပိုပြီးတိကျမှုဖြစ်လိမ့်မည်, အများဆုံးယောက်ျားတွေသမ္မာတရားတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖေါ်ပြချက်နှင့်အတူကပ်. သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါ, သင်သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ကြည့်ရှုသူသည်သင်တို့ကိုပေးသောလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစား, အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့မျှတ, shot တဲ့သဘောသက်ရောက်နေပါတယ်ကြောင့်, မှန်သော?
အဘယ်သူမှာနှလုံးနုပျိုတဲ့အပြစ်တင်နိုင်ပါသည် 61 နှစ်အရွယ်လူဖြစ်စေတစ်ဦးနုပျို 44 သမ္မာတရားကိုတစ်ဦး tad လုပ်ရမယ်အဘို့အနှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး? သူတို့ကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပအခြေအနေများကြောင်းကြောင့်သိ, သူတို့ကလူရဲ့ရေဒါတွေအများကြီးဖြတ်င်. ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်နှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အများကြီး fib – ထွက်ရှိအခြားအွန်လိုင်း daters မ​​ြင်နိုင်ဆက်ရှိနေရန်. ငါညာင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်သည်ဟုဆိုပေါ့.
ဤအလယ်အလတ်အလွန်သဘာဝနှင့်ကြိုတင်တွေ့ဆုံမှကွန်ပျူတာအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းကလူတွေနှင့်သူတို့့လျောက်ပတ်သောရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝရမည့်လိမ့်မည်မဟုတ်. ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သို့သောရာခိုင်နှုန်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေကြသည်? ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သို့သောရာခိုင်နှုန်းကိုအခြားသူများအပေါ်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ပျက်ကွက်’ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Checklists? ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သို့သောရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးရိုးသားသည်ကိုသိရဖို့လုံလောက်တဲ့စမတ်ရှိပါတယ် 63 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဝလွန်အများဆုံးလူ Checklists မကိုက်ညီပါဘူး, သူမကိုခြောက်နှစ်ကနေပုံတစ်ပုံ posts နှင့်သုံးဆယ်ပေါင်လွန်ခဲ့တဲ့အတိအကျဘာကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်?
အကြှနျုပျ၏ပွိုင့်ကျနော်တို့အုပ်စုပွေ့ဖက်အချို့မျိုးအတွက်ဗေဒင်သမားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သင့်ကြောင်းမဖြစ်, ငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းထားတာအဘို့ထိုသူတို့နှင့်ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံ. ထက်, ကြှနျုပျတို့သညျဤအမူအကျင့်ဖြစ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံဖို့ရန်ကြိုးစားလာ Ozzy ရဲ့့ကျိန်ဆဲခြင်းကိုကဲ့သို့သေချာသင့်ပါသည်, သို့မဟုတ် J.Lo ရဲ့့ကွာရှင်းရ. အမျက်တော် ထွက်. အဘယ်အရာကိုမျှရယူခြင်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင့်မအပေါင်းတို့ခါးသီး irrational မှုတ်စေဖြစ်ပါတယ်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သူမဆိုကိုဆည်းပူးဖူးဘူးနှစ်ခုစရိုက်များ.
ငါတို့မူကား, မုသာဝါဒီများကိုရပ်တန့်လို့မရဘူးကတည်းက, ဤနေရာတွင်သင်သည်သူတို့အားရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ယူနိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများရှိပါသည်:
1) ပိုပြီးပုံကိုပြောပါ. ငါက Natalie Portman တူကြည့်သောဦးခေါင်းရိုက်ချက်များကြည့်ဖို့ရှိသည်မည်မျှအဆမသိကြပါ, သူမစစ်မှန်သောအသက်တာ၌က Natalie Portly ယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာ, သို့သော်လည်းငါ့ကိုယ်သင်ခန်းစာကိုင်. ငါသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းသိမ်းယူငါ့ကိုအပိုဆောင်းဓါတ်ပုံစေလွှတ်မည်နိုင်လျှင်, ထို့နောက်အခြားသူတစ်ဦးအဖြစ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းရှိသည်ကိုမမျှမဆင်ခြေဆင်လက်ရှိပါတယ်.
2) ထိုဓါတ်ပုံ၏အရည်အသွေးကိုစဉ်းစားပါ. ရုပ်ရှင်နှင့်အဝတ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပြုသည်ထက်ကွဲပြားခြားနားကြည့်. ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Hairstyles, ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖက်ရှင်တွေ, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် palette. ပုံတစ်ပုံကိုခေတ်မမှီတော့ကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်, လူတစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းစွာတစ်ခုခုပုန်းအောင်းစေမည်အကြောင်း.
3) ထိုဓါတ်ပုံများ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုစဉ်းစားပါ. တကယ်ပဲပုံကိုဖွင့်ပိတ်ဖို့မှတပါးအခြားသော supporting ဓာတ်ပုံများ? တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ / သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်မယ်. ရင်ဘတ် up ကနေသူတစ်ဦးဦးကိုသာကြည့်ရှု? တူညီတဲ့အရာ. အားလုံးအနက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏နောက်ကွယ်မှသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ, သို့မဟုတ်ကြီးတစ်ခုကိုအတန်ကြာအားဖြင့်ပိတ်ဆို့? ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုန်းအောင်းနေသည်, အကြောင်းပြချက်ကောင်းနဲ့.
4) ယုတ္တိနည်းအရစဉ်းစားပါ. သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးချင်တယ်ဘယ်တော့မှမ, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုတက် add မပါဘူးဆိုရင်, ထိုသို့မှတ်စုတစ်ခုပါစေ. '' ဝမ်းခွဲမိမိကိုမိမိခေါ်ဆိုသောသူတစ်ဦးကကောင်လေး’ ဒါပေမယ့်အားကစားဘာမှသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသည်မဟုတ်မ. သူမင့်မလုပ်ပဲအဘယ်သူသည်မိန်းမနှင့်အတူတူပင် 39 ဒါပေမယ့်နှစ်ဦး grandkids ရှိပါတယ်.
ငါသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် profile တွင်သမ္မာတရားကိုအသိအမှတ်ပြုသည်တစ်ခုတည်းသောလျှင်စံချိန်တင်သွားနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ / သူမ၏အသက်အရွယ်လောက်အိပ်စရာဘို့အဆင်ပြေမယ့်သည်ဟုဆိုဦးမည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလူတွေရဲ့မတရားဖမ်းဆီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့ရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာပေါ်လာပါစေလိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့ကြံရွယ်နှင့်အိပ် မိ. မှဝေးစွာအော်ဟစ်သောအသံကိုဖြစ်ပါသည်.
မုသာဝါဒီများမှာရူးသွပ်ရယူခြင်းစ d'CLASS ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်သူတို့ embarrassingly ပြုမူခဲ့သည်ဖို့လိမ်လည်ခံနေရမှာဒါကြောင့်အမျက်ထွက်ရှိနေသောသူယောက်ျားတွေရဲ့စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ပြောဆိုသောင်. တစ်ဦးကသူမ၏အသက်အရွယ်ကိုချွတ်သုံးနှစ်ရိတ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်ကိုချွတ်. အခြားပတ်ပတ်လည်လှည့်နှင့်သူမ၏ရုပ်ပုံအထိအသက်မရှင်ခဲ့ပါဘူးသောမိန်းမကိုလက်ဝဲ. ငါ့အဖို့, ဤတစ်ညာဘက်စေရန်ပျက်ကွက်နှစ်ခုမှားယွင်းနေသည်. မုသာကိုသုံးသောလွဲချော်သွားတာ, သူမဟာဒုတိယရက်စွဲရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်, ပေးချေမည်, ဒါပေမယ့်အသက်အဘို့အသူမ၏အမာရွတ်ဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးင်.
တစ်စုံတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတပုံနှင့်တကွသင်လှည့်ဖြားခဲ့လျှင်, သနားသောသဘောဖြစ်ခြင်းမသာဖြင့်လူတန်းစားလုပ်ရပ်ဖြစ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုသာမကြောင့်. သမ္မာတရားကိုပြောပြခြင်းအားဖြင့်, သင်သမျှကိုဘယ်သူ့ကိုမှဖြစ်နိုင်သည်တပြင်လုံးကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကို clean up လုပ်ဖို့လုပ်နိုင်ပြုပါတယ်.
အပြန်ခုန်ထွက်တွင် – အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သွားကြဖို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်သည်?